‘नेपालका माओवादीसँग भारतका माओवादीहरू आक्रोशित छन्’ | Ratopati
‘नेपालका माओवादीसँग भारतका माओवादीहरू आक्रोशित छन्’
personश्रवण उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २२, २०७५ chat_bubble_outline0
भारतको नक्सलबाडी भन्ने सानो गाउँबाट उठेको किसान आन्दोलनले भारतको तत्कालिन सत्तालाई त्यति बेला निकै आतङ्कित बनाइदियो, जब त्यो कोलकाता पुग्यो र त्यो किसान आन्दोलनले कम्युनिस्ट विद्रोहको रूप लियो । कम्युनिस्ट विद्रोहको प्रतीकका रूपमा दरिएको नक्सलबाडी विद्रोहबाटै भारतका माओवादीलाई ‘नक्सली’ र ‘नक्सल’ भन्न थालियो । नक्सल अर्थात् विद्रोही । त्यही नक्सल आन्दोलनको दोस्रो केन्द्र कलकत्ता जन्मिएकी, हुर्किएकी र सोच्न थालेकी रुमेला सेन हिजोआज अमेरिकामा बसोबास गर्छिन् । कोर्नाल विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी उनी हाल कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट ‘पोस्ट डक्टरेट’ गर्दै छिन् । सन् ६० को दशक जति भारतमा निकै ठूलो उथलपुथल चल्दै थियो । सेन त्यो उथलपुथललाई नजिकबाट नियाल्दै र महशुस गर्दै थिइन् । त्यही आन्दोलनमा विशेष चाख राख्दै उनले दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत र भविष्य अध्ययन गर्दैछिन् । उनै सेन नेपाल आएको सन्दर्भ पारेर रातोपाटीका लागि श्रवण उप्रेतीले नेपाल र भारतको माओवादी आन्दोलनबारे गरेको अन्तरवार्ता ।
नेपाल र भारतको कम्युनिस्ट सशस्त्र आन्दोलनको अध्ययनका क्रममा ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी मुलुकहरूमा भएका त्यस्तै आन्दोलनलाई पनि ध्यान दिनु भयो कि ? कुनै समय त्यी स्थानमा पनि लेफ्ट इन्सरजेन्सी निक्कै बलियो थियो ।
ठीक कुरा उठाउनुभयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘फ्रेमवर्क’मा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कम्युनिस्ट वा माओवादीहरू आफै यो गर्ने गर्छन् ।
तर मेरो प्राज्ञिक विज्ञता दक्षिण एसिया हो । हुन त म अन्यत्रतिरको पनि पढ्छु तर सतही अध्ययनले मात्र त कोही पनि विज्ञ बन्न सक्दैन । मैले गहिराइमा गएर दक्षिण एसियामा काम गरेँ । यहाँको स्थानीय चरित्र, यिनको सैद्धान्तिक अवस्थिति कस्तो छ, पहिला कस्तो थियो ? कसरी बदलिए, यो सब विस्तृतमा भारत र पछि नेपालको बारेमा मैले अध्ययन गरेँ ।
नेपालमा मेरो चाख हुनुको कारण तपाईंले भन्नु भएजस्तै सबैतिर असफल भइसक्दा पनि नेपालमा भने माओवादीहरु बलियो शक्ति भएर आए । यहाँ झण्डै उनीहरूले केन्द्रीय सत्ता नै कब्जा गरेजस्तो भएको थियो । म यो सन् २००६ को कुरा गरिरहेको छु । त्यो बेला धेरै खालका बहस भइरहेका थिए, अनुमानहरू चलिरहेको थियो । त्यसबेलादेखिनै मैले नेपाललाई पछ्याउन थालेँ ।
म अहिले त्यसैको थप विकास हेर्न र मूल्याङ्कनका लागि नेपाल आएको हुँ । अलि ढिलो भयो जस्तो पनि लाग्ला तर एक हिसाबले यो १२ वर्षको ‘ग्याप’ ठीक पनि होला किनकि त्यो समय त धेरै उत्साह थियो । त्यस्तोमा साँचो कुरा ल्याउन सकिँदैन थियो ।
मलाई लाग्छ नेपालको माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कनका लागि यो ठीक समय हो ।
तपाईंलाई के लाग्छ, जो संसदीय राजनीतिमा फर्किए, उनीहरूमा संसदीय निर्वाचनबाट साँच्चै क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने थियो कि त्यो शब्दजाल मात्रै थियो ?
यसमा स्पष्ट यही कुरा हो भन्न गाह्रो छ । पीसीसी–सीपीआई नामको सङ्गठनबाट संसदीय राजनीति गर्न गएका एक जना सन्तोष राना भन्ने नेता थिए, जो नक्सलवाडी आन्दोलनका गन्यमान्य थिए । उनी इमान्दार थिए । उनमा सत्ता भोग गर्छु, मन्त्री हुन्छु भन्ने त्यस्तो गरेका थिएन ।
उनले त नक्सलवादी राजनीतिमा लागेका मध्य पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन जिते तर पनि उनी गाउँमै आफ्नो काममा लागिरहे । फेरि उनको गाउँ पश्चिम बङ्गालको सबैभन्दा गरिबमध्येको क्षेत्र हो ।
तर उनले संसदमा भने खासै केही गर्न सकेनन् । त्यसैले यसमा म आफै स्पष्ट हुन सकेकी छैन ।
तेस्रो धार कुन थियो ?
तेस्रो धारचाहिँ वर्तमान माओवादी समूहहरू हुन् । उनीहरू सशस्त्र सङ्घर्ष त गर्नुपर्छ तर चारुको जस्तो व्यक्ति हत्या गरेर होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
उनीहरूले माओलाई पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भने । उनीहरूले ‘मिलिटरी मास मोबिलाइजेसन’ गर्नुपर्छ भने । यिनले खुला सङ्गठन र भूमिगत दुवैमा ध्यान दिन्छन् ।
यिनीहरू आफै त धेरै पढेलेखेका थिएनन् तर उनीहरूले गाउँ–गाउँमा पढेलेखेका अझ नेतृत्व क्षमता भएको मानिसहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई आफूमा जोड्न थाले ।
यो तेस्रो धारमा दुई समूह थियो । एउटा उत्तरमा थियो भने अर्को थियो दक्षिण भारतमा ।
दक्षिणमा सीपीआई (एमएल)–पीडब्लूजी (पिपुल्स वार ग्रुप) एउटा थियो । उत्तर भारतमा एमसीसी (माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर) र पार्टी युनिटी थियो । यी तीनवटै मिलेर पछि भाकपा (माओवादी) बन्यो ।
अब भारतमा माओवादीमा यही तेस्रो धार मात्र बाँकी रहेको छ । बाँकीको त समाचार पनि आउन छाडेको छ ।
यिनीहरूको सङ्गठनले ग्रासरुट तहमा महसुस गर्न सकिने बदलाब ल्याउन सहयोग गरेका छन् ।
यो कुरा अझ बढी तेलङ्गानामा पीडब्लुजीले गरेको थियो ।
जब उनीहरू यिनको सङ्गठनमा आए तब उनीहरूको आवाज पनि आयो र संसदीय पार्टीहरूलाई पनि त्यीनको मुद्धाहरुबारे थाहा भयो ।
त्यस्तै परिवर्तन भूमि र शिक्षामा पनि भयो । अहिले तेलङ्गानामा दलितहरूको लागि अलग निःशुल्क विद्यालयहरू छन् ।
जो पनि भ्रष्ट अधिकारीहरू थिए, माओवादीहरू गाउँको बीचमा ल्याएर सबाल जवाफ गराउँथे र उनीहरूलाई जवाफ दिनु पनि पथ्र्यो । यसले तिनलाई बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनायो । हुन त यसले डरको माहोलको अवस्था पनि ल्याएको थियो ।
तर आन्द्र प्रदेशमा बौद्धिक र कर्मचारीहरू माओवादीसँग अन्तत्र्रिmया र संवादको अवस्थामा थिए ।
तपाईंले लोकतन्त्र भनेर केलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ? तपाईंले भन्नुभएको लोकतान्त्रिक अभ्यास सशस्त्र माओवादी आन्दोलनभित्र कत्तिको पाउनुभएको छ ?
मैले लोकतन्त्र भनेर ‘लोकतान्त्रिक डिपेनिङ’लाई भन्न खोजेको हो । लोकतन्त्रलाई तल गहिराइसम्म पुर्याउने । लोकतन्त्र भन्नाले माथिल्लो निकायमा मात्रै होइन कि हरेक जनताले महसुस हुने खालको परिपाटी भन्न खोजेको मैले ।
लोकतन्त्रको अभ्यासको मापन जनताको तल्लो तप्काको आवाज पनि माथिल्लो निकायसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेले हुन्छ । साधारण जनताले आफ्नो आवाज बोल्न सक्ने र त्यसको सुनुवाई हुने अवस्था भए बल्ल वास्तविक लोकतन्त्र हुन्छ ।
सङ्गठनको ढाँचाले गर्दा एउटा खाले फ्रेमवक हुनसक्छ तर कम्युनिस्टहरूको संगठनभित्र राम्रो लोकतन्त्रिक अभ्यास हुन्छ । यसको चर्चा र बहससमेत हुने गर्छ । तर युद्धमा रहनुपर्ने र दमनको अवस्थाले यसको वास्तविक अभ्यास हुन सकेन राम्ररी नहुन सक्छ ।
भावि दिनमा नेपाल र भारतमा माओवादी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्ला ?
अब भविष्यवाणी गर्न त गारो हुन्छ । त्यो त ज्योतिषले गर्ने काम हो ।
तपाईंले गरेको अध्ययन र अवलोकनबाट केही भन्न सकिन्छ कि ?
स्थानीयस्तरमा परिचालन रहनेछ । जस्तो अहिले छत्तिसगढमा छ । संसदीय पार्टीले समस्या सम्बोधन गर्न नसकेका स्थानमा माओवादीहरू स्वभाविक रूपमा आउनेछन् । किनभने सधैँ यस्तै भइरहेको छ । यही प्रक्रिया सन् ६० को दशकबाट निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालको आन्दोलनको भने अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।
भन्नुको अर्थ भारतमा माओवादी आन्दोलन पूरै सकिएला जस्तो लाग्दैन ?
शक्ति हासिल गर्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?
निकै न्यून छ । माओवादीहरूले मान्दै आएको जुन उद्देश्य छ, दीर्घकालीन जनयुद्ध गरेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने भन्ने, भारतमा त्यो सम्भावना छैन ।
भारतमा उनीहरूको कार्यनीतिमै केही समस्या छ जस्तो लाग्दैन ? किनभने उनीहरूले ससानो स्तरमा सङ्गठनात्मक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न सके पनि सङ्घर्षलाई कहिल्यै पनि देशव्यापी बनाउन सकेनन् नि ?
यसलाई दुवैतर्फबाट हेर्नुपर्छ, राज्य र आन्दोलन दुवैतर्फबाट ।
आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीहरू हो विभाजन र गुट । उनीहरू त एक अर्कोलाई सहँदैनन्, यहाँसम्म कि मार्नसमेत पछि पर्दैनन् ।
सामान्य अवस्थाम ापनि एकअर्काबाट विलकुल अलग काम गरिरहेका हुन्छन् ।
भारतमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानिससँग भेटेकी छु, उनीहरू निक्कै ‘स्मार्ट’ छन् । मैले तपाईंलाई भनिरहेको कुरा उनीहरूलाई सबै थाहा छ ।
माओवादी अथवा अझ भनौँ कम्युनिस्टहरूको एउटा समस्या छ । त्यो के भने उनीहरू आफ्नो विचारधाराको सीमाभित्र मात्रै बस्छन् । त्योभन्दा बाहिर जानुभयो भने तपाईं संशोधानवादी भइहाल्नुहुन्छ ।
उनीहरूमा वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर लिइने लचकताको निकै कमी छ । भन्न त ‘रणनीतिक अनुकुलन’ भन्छन् तर पनि उनीहरूमा लचकता निक्कै कम छ ।
तपाईंलाई उनीहरू अझै लचिलो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
उनीहरू सिद्धान्तमा त रणनीतिक रूपमा बाङ्गोटिङ्गो हिँड्नु पनि सही छ भन्छन् । जेसुकै गर्नुस् क्रान्तिलाई बचाइराख्नुस् भन्ने गर्छन् ।
तर इतिहासले के देखाएको छ भने रणनीतिक रूपमा बाङ्गो बाटो हिँडेरै नै उनीहरू क्रान्तिबाट बाहिरिसकेका हुन्छन् ।
यो निक्कै संवेदनशील सन्तुलन हो । मलाई थाहा छैन यसको समाधान के हो ।
यसको कारणबारे एक स्थानीय नेताहरूसँग कुरा गर्दा निक्कै रोचक जवाफ पाएँ । हुन त सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय नेताहरूमा त्यति दख्खल हुन्न तर उनीहरुले सङ्ठगनहरूमा एक ठूलो समय बेथित गरेका हुन्छन् र तलको वास्तविकतासँग उनीहरू निक्कै परिचित हुन्छन् ।
उनीहरूमा पनि एक खालको निराशा थियो । क्रान्ति किन कमजोर भयो भन्ने मेरो प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ थियो, ‘के गर्नु सबैको हातमा मोबाइल छ, अब मोबाइल नै हाम्रो दुस्मन भयो !’
उनका अनुसार पहिले मजदुरहरू, किसानहरू काम गरेर आएपछि राति बोलाउँदा, सङ्गठनका वैठकहरुमा आउँथे । अब उनीहरू मोबाइलमा फिल्म हेर्न थाले, फेसबुक चलाउन थाले, विदेशी म्युजिक भिडियोहरू हेर्न थाले । अब तिनको सपनानै बदलियो भन्ने उनीहरूको विश्लेषण थियो उनको ।
आन्द्र प्रदेशमा पहिले त्यहाँको आरईसी (रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज) बाट धेरै माओवादी नेताहरू आएका थिए ।
पछिल्लो समय म आरईसी गएको थिएँ, अहिले त त्यहाँ विद्यार्थी युनियन नै प्रतिबन्धित थियो ।
अत्यमा, तपाईंले भारत र नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एकअर्कालाई कसरी हेरेको पाउनुभएको छ ? यिनीहरूले एकअर्काबाट केही सिकेका छन् ?
दुवैले के सिके पनि भन्न गाह्रो छ । भारतमा सन् ७० को दशकमा सबै नामेट भयो भनिएको आन्दोलन सन् ९० को दशकको अन्त्यबाट कसरी बलियो भएर आयो भन्ने कुराबाट नेपालका माओवादीहरूले सिकेको जस्तो लाग्छ ।
अब नेपालकाबाट भारतकाले के सिक्लान् वा सिके भन्ने चाहिँ त्यति सजिलो छैन । किनकि नेपालका माओवादीहरू निर्वाचनमा गएदेखि भारतका माओवादीहरू आक्रोशित छन् । उनीहरूले यहाँका माओवादीलाई त संशोधनवादी भनेर आरोप लगाएका छन् । भारतका माओवादीहरू त विशुद्धतामा जोड दिन्छन् । उनीहरूको जोड के छ भने रणनीतिक रूपमा जेसुकै गर्नुस् तर निर्वाचनमा भाग नलिनुस् भन्ने छ उनीहरुमा । उनीहरूको विचारमा निर्वाचन पुँजीवादी जाल हो । फेरि भारतको इतिहास पनि त्यही छ । जो पनि निर्वाचनमा गएका छन्, उनीहरूले केही गर्न नसकेको र फर्किन पनि नसकेको देखिन्छ । हामी अध्येताहरूले यो सबै कुराको मसिनो गरी अध्ययन गर्ने हो । अहिले पनि म त्यसैमा केन्द्रित छु ।